Inqubomgomo yobumfihlo -
Thola 33% isephulelo ngonyaka wokuqala. Ikhodi yekhuphoni - I-33LESS. Isipesheli sesikhathi esincane.
I-CRM eyenziwe ngokwezifiso
Bona Ukuhola Okungabikho
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-CompanyHub
Yini osinika yona
Ukusetshenziswa kolwazi oluqoqiwe
Indlela Esivikela Ngayo Ulwazi Lwakho
Umthetho jikelele ngokuhlanganyela
Okumelwe Sitshele Idatha
Kugcine ukubuyekezwa Ku: 24 May 2018
Ukwaziswa kwakho kubalulekile kithi njengoba kunjalo kuwe futhi sizibophezele ukuvikela ulwazi lwakho. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza ukuthi yiluphi ulwazi i-CompanyHub eqoqa, ukuthi luqoqa kanjani ulwazi lwakho ngokusebenzisa izindlela ezihlukahlukene zedijithali nokuthi lisisebenzisa kanjani lolu lwazi oluqoqwe. Ucelwa ukuba ubuyekeze le Nqubomgomo Yobumfihlo ngaphambi kokuthi (i) isebenzise izinhlelo zokusebenza zeWebhubhu / Izicelo ze-CompanyHub, (ii) ukufinyelela nokubhalisa nge-websitehubhub.com and / noma (iii) usebenzisa noma yiziphi ezinye izindawo ezihlobene, izicelo, amasevisi namathuluzi , kungakhathaliseki ukuthi uyifinyelela kanjani noma uyisebenzise. Ngenhloso yokuqonda okungcono, isicelo seNkampaniHub, iwebhusayithi kanye nawo wonke amasayithi ahlobene, izinhlelo zokusebenza, izinsizakalo namathuluzi emva kwalokho okubizwa ngokuthi 'COMPANYHUB PLATFORM'.
Sinikeza ikhono lokuxhuma noma ukusebenzisa i-Platform ye-CompanyHub usebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu. Izinhlinzeko zale Nqubomgomo Yobumfihlo ziyasebenza kuwo wonke ukufinyelela okunjalo kwewebhu kanye nokusetshenziswa kwe-Platform yeNkampani.
Ngokufinyelela kwi-Platform yeNkampani futhi ngokunikeza imininingwane eceliwe, uyavuma Inqubomgomo Yobumfihlo. Sigcina ilungelo lethu lokushintsha noma ukwenza izinguquko ezifanele kule Nqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile, okuzosebenza ngempumelelo ekuthunyelwe kwayo. Sizokusondeza kuphela uma kwenzeka kukhona izinguquko ezinkulu kule Nqubomgomo Yobumfihlo. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwe-Platform ye-CompanyHub, ngemuva kokuthola lokho okushiwo, kuzobhekwa njengokwamukelwa kwakho okwenziwe izinguquko.
Imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa yi-CompanyHub Platform aziqondiswa kubantu abangaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalolunye (13). Uma Uncane, sikucela ukuba ungahlanganyeli noma iyiphi idatha yomuntu siqu noma usebenzise Imikhiqizo yethu / noma Imisebenzi.
Siqoqa ulwazi osinikezayo noma uvumele ukuba sifinyelele. Ulwazi lungabandakanya kepha alukhawulelwe egameni lakho, isithombe, usuku lokuzalwa, i-imeyili kanye / noma ikheli lomzimba, ucingo kanye / noma inombolo yeselula, ubulili, uhlu lokuthintana, ulwazi lomphakathi kanye nephrofayela, imininingwane yendawo (GPS), umsebenzi kanye nokusebenza ulwazi kanye nolwazi oludingekayo mayelana namakhodi okukhokha / amakhadi esikweletu / ama-akhawunti asebhange. Uyavuma ukuthi uyadalula lolu lwazi ngokuzithandela. Uma ungafisi ukudalula lolu lwazi, okhululekile ukukwenza, kungenzeka ukuthi ngeke ukwazi ukuthola izinsizakalo ezithile ezinikezwe i-Platform yeNkampani.
Singase siqoqe ngokuzenzakalelayo lezi zinhlobo zolwazi ezilandelayo ukuze sikunikeze ukusetshenziswa nokufinyelela kwi-Platform ye-CompanyHub, futhi usisize senze futhi sithuthukise isipiliyoni sakho:
Ulwazi mayelana nekhompiyutha yakho noma idivaysi yokufinyelela kwi-Platform ye-CompanyHub, ikheli lakho le-IP, isiphequluli, inguqulo yesiphequluli, uhlelo lokusebenza, ireferensi, inethiwekhi yeselula, ukubukwa kwekhasi, idatha yesikhangiso, idatha ye-log web ejwayelekile.
Ulwazi olunikezayo ukubhalisa izaziso ezihlukahlukene ezifana nemeyili yokulandelela, isifinyezo somsebenzi nsuku zonke, izaziso zomsebenzi, izikhumbuzi zomsebenzi, izaziso zokuthumela izinto zangaphandle, idatha ye-bulkchanges, i-invoyisi kanye / noma izincwadi zezindaba njenge isib., Ikheli le-imeyli njll.
Ukwaziswa okuhlobene nanoma yikuphi ukuthenga kanye nokuthengiselana okufakayo kwi-Platform ye-CompanyHub njengegama, ikheli, ikheli le-imeyili, ucingo, imininingwane yekhadi njll.
Ulwazi kusuka kumasistimu oxhumana naye ku-Platform ye-CompanyHub njenge-akhawunti yakho yama-imeyili, amakhalenda. Uma Usigunyaza ukufinyelela i-Akhawunti yakho ye-Google / Imeyili ye-imeyili, sizodonsa zonke izingxoxo zakho ze-imeyili ezinyangeni zokugcina ezingu-Six (6) kusukela ngosuku lokugunyazwa bese uqhubeka ukudonsa uze ususe i-akhawunti ye-imeyili. Amasistimu ethu azobe ehlaziya lawa ma-imeyili futhi ahlukanise othintana nabo abalulekile asekelwe engxoxweni yakho ye-imeyili futhi bahlanganise ama-imeyili nabathintana nabo.
Singase futhi siqoqe ukwaziswa okuvela kuwe noma ngezinye izindlela, njengokuthi uxhumane neqembu lethu lokusekela kwamakhasimende, uma uphendvula uphenyo kanye / noma ngesikhathi sokuxhumana kwakho namalungu ethu okuthengisa nokukhangisa noma amaqembu okusekela ubuchwepheshe. Singakwazi ukuqapha noma ukurekhoda izingxoxo zocingo phakathi kwakho noma noma ubani owenzayo egameni lakho nabasebenzi bethu bokusekela ngenhloso yangaphakathi nekhwalithi yangaphakathi. Ngokuxhumana nathi, uyavuma ukuthi ukukhulumisana kwakho kungase kuzwakale, kuhlolwe, noma kurekhodiwe ngaphandle kwesaziso esengeziwe noma isixwayiso.
Thina (kufaka phakathi izinkampani esizisebenzisana nabo) singafaka amafayili amancane wedatha kukhompyutha yakho noma kwenye idivayisi. Lawa mafayili wedatha angaba amakhukhi, amathegi we-pixel, ama-Flash cookies, ama-beacons web (ama-web beacons ama-electronic images angasetshenziswa kuma-imeyili ethu alandelwe) noma esinye isitoreji sendawo esinikezwe isiphequluli sakho noma izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo (ndawonye "Amakhukhi"). Sisebenzisa la makhukhi ukukubona njengomthengisi; ngokwezifiso amasevisi wethu, okuqukethwe, nokuxhumana; qhathanisa ukusebenza kwezokuxhumana; siza ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha kwe-akhawunti yakho akukethonywanga; ukunciphisa ingozi nokuvimbela ukukhwabanisa; futhi ukukhuthaza ukuthembela nokuphepha kuwo wonke amasayithi ethu nezinsizakalo zethu.
Ukuze ukukusize ekukhwabaneni nasekusetshenzisweni kabi kolwazi lwakho lomuntu siqu, lolwazi nolwazi lwebhizinisi, singase siqoqe ulwazi ngawe kanye nokuxhumana kwakho ne-website yethu noma amasevisi we-Platform ye-CompanyHub. Singahlola futhi ikhompyutha yakho, ifoni ephathekayo noma enye idivayisi yokufinyelela ukukhomba noma iyiphi isofthiwe noma umsebenzi ononya.
UKUSETSHENZISWA KOLWAZI OKUQHELEKILE
Injongo yethu eyinhloko ekuqoqeni ulwazi lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi lwebhizinisi ukukunikeza ulwazi oluphephile, olushelelayo, olusebenzayo, nolwenziwe nge-CRM. Ulwazi lomuntu siqu olufakwe kithi ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu luzosetshenziselwa kuphela:
Yenza i-CompanyHub ngokwakho;
Nikeza ukusekelwa kwamakhasimende;
Ulwazi lwenqubo futhi uthumele izaziso / izibuyekezo / izikhumbuzi mayelana nemihlangano / othintana nabo;
Ukuxazulula izingxabano, ukuqoqa imali, nokuxazulula izinkinga;
Vimbela imisebenzi engavunyelwe noma engekho emthethweni, futhi usebenzise imigomo yethu yokusetshenziswa;
Yenza ngokwezifiso, ulinganise, futhi uthuthukise amasevisi we-CompanyHub Platform kanye nokuqukethwe, isakhiwo, nokusebenza kwamawebhusayithi ethu, ukuxhumana, amathuluzi nezinhlelo zokusebenza;
Khipha okuqukethwe okuhlosiwe, ukumaketha, izaziso zokuvuselela izinsizakalo, nokunikezwa kokukhangisa okusekelwe ekuthandweni kwakho kokuxhumana;
Xhumana nawe ngenombolo yeselula ehlinzekwe nguwe, ngokubeka ikholi yezwi noma ngokusebenzisa umbhalo (SMS) noma imiyalezo ye-imeyli;
Thumela izitatimende, ama-invoyisi, izikhumbuzi zokukhokha kuwe futhi uqoqe izinkokhelo ezivela kuwe
UKUVIKELA NOKUBHUMANA NOKWAZI
Sigcina futhi senze imininingwane yakho yomuntu siqu ngokusebenzisa uhlelo lwethu olugcinwe kumavava we-"Amazon Cloud" avikelekile kakhulu. Idatha yokubamba indawo yedatha isekelwe ekunciphiseni ukuvama nokufinyelela ukusebenza okulungile kuwe nabasebenzisi bakho. Sinezizinda zethu ezibhalisiwe namalayisensi afanele ukuqinisekisa ukuphepha kwewebhu. Sivikela ulwazi lwakho ngokusebenzisa izinyathelo zokuphepha ezomzimba, ezobuchwepheshe, nezokuphatha ukunciphisa izingozi zokulahleka, ukusetshenziswa kabi, ukufinyelela okungagunyaziwe, ukudalulwa nokuguqulwa. Ezinye izivikelo esizisebenzisayo yizibhamu kanye nokubethelwa kwedatha, izilawuli zokufinyelela ngokomzimba ezikhungweni zethu zedatha, nokulawulwa kokugunyazwa kokufinyelela kolwazi.
Asithengisi noma ukuqasha ulwazi lwakho lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi lwebhizinisi kubantu abangaphandle abangabanjwanga ngenhloso yokukhangisa ngaphandle kwemvume yakho ecacile. Singase sihlanganise imininingwane yakho ngolwazi esiqoqa futhi silisebenzise ukuze sithuthukise futhi senze i-Platform ye-CompanyHub. Njengomthetho jikelele, sisebenzisa futhi sichaze ulwazi lwakho njengoba sikholwa ukuthi kudingekile: (i) ngaphansi komthetho osebenzayo, noma imithetho yokukhokha; (ii) ukuphoqelela imigomo nemibandela yethu; (iii) ukuvikela amalungelo ethu, ubumfihlo, ukuphepha noma impahla, kanye / noma yezakwethu; futhi (iv) ukuphendula izicelo ezivela enkantolo, izinhlangano zomthetho, izinhlangano ezilawulayo, nezinye iziphathimandla zikahulumeni kanye nohulumeni, ezingabandakanya iziphathimandla ngaphandle kwezwe lakini.
Singabelana ngolwazi lwakho lomuntu nabantu abathandekayo bokuthi:
Amalungu enkampanini yethu yomzali kanye nezinsizakalo (ngokubambisana nomndeni wethu wenkampani) ukunikeza okuqukethwe okuhlangene, imikhiqizo, nezinsizakalo (njengokubhalisa, ukuthengiselana nokusekelwa kwamakhasimende), ukusiza ukuthola nokuvimbela izenzo ezingekho emthethweni nokuphulwa kwezinqubomgomo zethu. Amalungu omndeni wethu wenkampani azokusebenzisa lolu lwazi ukukuthumela ukukhangisa ukukhangisa kuphela uma ucele amasevisi abo.
Sina idatha nezinhlangano emhlabeni jikelele esizilawulayo, zilawulwa yibo, noma ngaphansi kokulawula kwethu okuvamile, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu.
Sokwabelana ngolwazi nabahlinzeki bensizakalo abasisiza ukuthi sinikeze amasevisi wethu. Abanikezeli bezinsizakalo basisiza ngezinto ezifana nokukhokha inkokhelo (okusho abahlinzeki bokukhokha, izindlela zokukhokha), ukusingatha iwebhusayithi, ukuhlaziywa kwedatha, ubuchwepheshe bezokwaziswa kanye nengqalasizinda ehlobene, ukuhlinzeka ngamakhasimende, ukulethwa kwe-imeyli nokuhlola. Njll Abahlinzeki bezinsizakalo ngaphansi kwenkontileka abasiza ngemisebenzi yebhizinisi lethu , njengokukhwabanisa, ukukhangisa, kanye nezobuchwepheshe. Izivumelwano zethu zithi abahlinzeki bezinsizakalo basebenzise ulwazi lwakho kuphela mayelana nezinsizakalo abenza kithi hhayi ngokuzuzisa kwabo noma ngokuphula izinqubomgomo zethu zobumfihlo.
Ngokulawulwa kwezomthetho, izikhulu zikahulumeni, noma ezinye izinhlangano zesithathu ngokulandela i-subpoena, umyalelo wenkantolo, noma enye inqubo yomthetho noma imfuneko eqondene nathi noma omunye wabathintekayo bethu; lapho kudingeka sikwenze ukuze sihambisane nomthetho; noma lapho sikholelwa, ngokubona kwethu kuphela, ukuthi ukudalulwa kolwazi lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi lwebhizinisi kuyadingeka ukuvimbela ukulimala ngokomzimba noma ukulahleka kwezimali, ukubika umsebenzi osolwa ngokungemthetho noma ukuphenya okunye ukwephula.
Ukhululekile ukusibuza nganoma yisiphi isikhathi ukushintsha, ukudlulisa kanye / noma ukusula / ukuchithwa kolwazi lwakho olugcinwe nathi ngokuthumela i-imeyili ku- support@companyhub.com. Sizocubungula isicelo sakho ngasinye, ngokulandela inqubomgomo yethu yokugcina njengoba kuchazwe ngezansi,
Ukhululekile ukunciphisa amakhukhi ethu uma imvume yakho yokufaka isiphequluli noma isiphequluli, ngaphandle kokuthi amakhukhi ethu adingekayo ukuvimbela ukukhwabanisa noma ukuqinisekisa ukuphepha kwamawebhusayithi esiwalawulayo. Noma kunjalo, ukwehla amakhukhi ethu kungaphazamisa ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi kanye / noma izici zethu zesevisi.
Uma ungafisi ukuthola ukuxhumana kwethu kokuthengisa noma ukubamba iqhaza ekukhusheni kwethu, landela izinkombandlela ezinganikezwa ngaphakathi kokuxhumana ukuphuma kulezo zinkulumo esikhathini esizayo.
Kungakhathaliseki ukuthi isicelo sakho sokususwa kolwazi lwakho lomuntu siqu kusuka kumaseva ethu, kungase kudingeke sigcine idatha yomuntu siqu ngesikhathi esifanele njengalokhu kudingekile ukuze sigcwalise izibopho zethu ngaphansi kweMigomo yokuSebenzisa ngaphandle kokuba isikhathi eside sokugcina sidinge noma sivunyelwe umthetho, Sifeza imithwalo yethu yemfanelo echazwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo ngaso sonke isikhathi. Ngoba singafinyelela kithi nganoma yimiphi imibuzo kule ndaba.
Ukusebenzisa kwakho kwemikhiqizo namasevisi wethu, nanoma yikuphi ukuphikisana okuvela kubo, kuncike kule Nqubomgomo Yobumfihlo kanye Nemigomo Yokusetshenziswa. Sicela uvakashele Imigomo yethu yokusetshenziswa, echaza eminye imigomo elawula ukusetshenziswa kwemikhiqizo namasevisi ethu.
Ngokwamukela le nqubomgomo, uyavumelana nezinqubomgomo zethu zokuqoqa idatha, izinqubomgomo zokugcinwa nokusetshenziswa kwezinqubomgomo ze-cookie njengoba kuchazwe kule nqubomgomo. Ukuze uthole imibuzo noma ukukhathazeka, sicela uthinte Isevisi yamakhasimende / Ubumfihlo ku support@companyhub.com.
Thatha uhambo lwe-15 min ye-CompanyHub futhi ulungele ukujabula
Ake sizame Izinsuku ezingu-14 zamahhala. Awekho ikhadi lesikweletu elidingekayo.
ku IyatholakalaApp Store
I-Copyright © 2018 CompanyHub. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Sisebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ukusebenza nokusebenza kwabasebenzisi bethu. Funda wethu Cookie yemfihlo Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe. Ngiyitholile